Bata Makambani Kuzvidavirira | Martech Zone
Ini ndaigona kugovana dzimwe huru dzinotyisa nyaya newe pane yangu nhoroondo nemabhangi nemakadhi echikwereti. Zvimwe zvacho zvakabvumwa kuti imhosva yangu asi zvizhinji zvacho zviito zvisina musoro zvemabhangi. Hameno kuti vakomana ava vanovata sei usiku… mari zhinji, mabhailouts, mabhonasi epamusoro uye mari dzefesheni dzisina musoro hadzina kana kuvabvisa kuti vavandudze masisitimu avo.
Heino muenzaniso wakanaka… bhizinesi rangu kiredhiti kadhi rakadzimwa kaviri ndichifamba. Pamberi penzendo mbiri idzi, ndakazivisa kubhangi kuti ndinenge ndichifamba uye kuona kuti handina kumakwa. Kufona kwacho kwaive kupedza nguva - ndakavharirwa kaviri basa rekufungidzira. Kaviri zvakange zvakaringana… uye yekare online sisitimu uye kushaya rutsigiro pakupera kwevhiki nehusiku zvakazoita kuti ndidzokere kubhangi hombe. Tichavadaidza kuti JP.
JP ine yakanaka inotyisa online sisitimu. JP ine yekunze waya kugona. JP ine app kwandinogona kuisa cheki nekutora pikicha yacho. JP kunyange ine payroll kugona neakaunzi yangu. Zvichida chinhu chinotonhorera… JP akandipa mubhengi wangu. Chii chinonzi wega bhangi? Ndiye mumwe munhu wandinofanira kutumira email uye kufona nguva dzese kana ndine dambudziko. Wangu mubhengi anobva andiudza iyo 1-800 nhamba yekufonera rubatsiro. Iko kukura kukuru pamusoro pechinyakare system yekungodaidza iyo nhamba 1-800 munzvimbo yekutanga. [Ehe, iko kutsvinya]
BTW: Wangu mubhengi anodiwa uye ndinoziva ari kuedza kundibatsira nepese paanogona napo. Izvo hazvigadzirise dambudziko, zvakadaro.
Muvhiki ino, ndaifanira kuhodha matikiti endege e Shingairira musangano muSan Francisco pakupera kwemwedzi uno. Kutanga ini ndaishandisa Kayak uye kiredhiti kadhi rakatadza. Tevere ndakashandisa iyo Delta.com saiti uye ikatadza. Nguva mbiri idzi yakati kero yangu haina kuenderana neakaundi yangu. Dambudziko rega ndere kero yangu yakanyorerwa nenzira imwecheteyo pamasaiti ese ari maviri saka hapana musiyano chaiwo. Panzvimbo pekurembera, ndakamira ndakamira apo mumiriri weDelta akafonera bhangi rangu kuti rione kero. (Kunaka kwakanaka kweDelta!)
Mumiriri weDelta akadzoka ndokundiudza kuti bhangi rangu rakavaudza kero yangu yandakapa haina kufanana. Iye zvino ndatsamwa. Inotevera mumutsetse ndeyangu mubhengi wega. Wangu mubhengi anosangana ne technical technical uye vanokurudzira kuti ndiedze kero yangu pamwe kana ndisina Zip4 pane yangu zip kodhi. Kunyanya.
Iyo Delta saiti haibvumire kuwedzerwa kweZip4, saka nguva yakarasika pakati peemaemail angu uye nemabhengi emunhu wandaifonera kuchikwata chake chekutsigira anga ari kusuka. Ini rega rega rangu rekubhengi azive kuti harisati richishanda. Mazuva mana gare gare uye ini handina matikiti.
Panguva ino unogona kushamisika kuti sei ini ndisingangotora imwe yemamwe makadhi angu uye kubhadhara tikiti. Sei? Nekuti izvi zvinofanirwa kushanda. Izvi ndizvo zvinoitwa nebhizinesi kiredhiti kadhi… yekuita zvinhu senge kubhuka kufamba, kutenga zvishandiso, nezvimwewo ini do ndine dzimwe nzira dzekutenga tikiti uye ndine chokwadi chekuti vanhu vazhinji vakanganisa hurongwa uye vakaita izvo.
Asi ini handisi kuzoenda.
Isu tese takatendeseka nemabasa akawandisa muhupenyu hwedu. Tinoshivirira zvikanganiso zve software, nyaya dzebhengi, nyaya dzerunhare, nyaya dzeInternet… hupenyu hwedu hausi kuve nyore nezvose izvi zvinhu, zvave kuomarara. Uye apo isu patinowedzera kuwedzera kuomarara, tinowana mamwe matambudziko. Pamwoyo weese matambudziko aya inyaya yekuti tasvika pakutarisira mashandiro uye hatichabatise makambani kuzvidavirira. Zviri nyore kutora rimwe kiredhiti kadhi pane kuramba uchidana nekutumira tsamba kubhangi rangu chairo.
Asi mangwana ndiri kuzorasa zvimwe zvibereko pafoni mukati uye muemail neyangu mubhengi wega. Kubudirira kwake (zvinosuruvarisa) kuzotambura, sezvakaitawo tekinoroji timu yaanoshanda nayo. Ndiri kuzoona kuti izvi zvinogadziriswa - kuitira kuti vamwe vasapfuure nezvandiri kusangana nazvo.
Dai isu tese takabata makambani kuzvidavirira, isu taizoenderera nekuvandudza uye isu tese tinobatsirwa nazvo.
Iyo IPad Hype… Nei Uri Iwe Unotevera